Service Recovery weerar – Kabashada Data weerar – Kabashada Data Software | Service Recovery weerar – Kabashada Data weerar – Kabashada Data Software
Service Recovery weerar – Kabashada Data weerar – Kabashada Data Software
About UsContact UsQaanuunka Arrimaha Khaaska ahSearch ResultsSite Map
Waxa ku jira Service Recovery weerar ah Posted on December 7, 2014March 6, 2015 by admin	Adeegyada kabashada weerar
Adeegyada kabashada weerar – malaha waa mid ka mid ah ugu badan ee adeegyada baahida loo qabo in suuqa maanta. Fikradda khasaaraha xogta kaliya waa si argagax leh in ay kaliya noqon kartaa nidaamka maalin Xayiraadda a. Tani waxa ay noqotay dhibaato maalin kasta in maalmaha cimrigaaga oo ka mid ah kuwa ugu cuslaataan ee kombiyuutarada baahidooda kaydinta xogta. Laakiin wax wanaagsan waxaa jira adeegyo mid weli heli kartaa. Hadda, marka aad u baahan doontaa Adeegyada kabashada weerar?
Sida iska cad, waxaad u baahan doontaa adeeg markan aad la kulanto khasaaro xogta lama filaan ah oo ku saabsan nidaamka weerar aad. Weerar waxaa dhab ka dhigay in ay sii ammaan data. Tusaale ahaan, weerar 5, xogta u qaybsan yahay qaybo by mirroring. Marka disk gaar ah u dhaco waalan, ka saxannada kale ku jiraan file isla istaagi doonaan inay gurmadka. Si kastaba ha ahaatee, waxa iman doona wakhti marka nidaamka ay u baahan doonaan Adeegyada kabashada weerar haddii dhibaatada dhufatay diyaariyeen oo dhan. Dhibaatooyinka sida tirtirka shil faylasha, musuq-maasuqa ee files keenay by fayrusyada, korontada lama filaan ah taasoo keentay in khasaare xogta iyo wax badan oo dhan in ka badan abuuraa baahi weyn loo qabo adeegga.
Su'aasha haddii xogta laga badiyay weli la raadsan karaa waa sidaas ugu xadgudbaan. Runta waxa ay tahay, waxaa mararka qaar dhici karta xogta marka aan dib ugu soo bixi doonaa in ay 100% foomka kaamil ah. Tani waxaa sabab u ah qaar ka mid ah xuduudaha u keenay by baaxada dhibaatada ka. Laakiin taasi gebi ahaanba la caawin karo.
Adeegyada kabashada weerar sida caadiga ah u muuqdaan in aad u isticmaasho software si loo saxo dhibaatada. Software waxaa loogu talagalay in la xaawilayo in xogta ku xayiran gudaha nidaamka. Sababta oo ah miday ee software this, adeegga xitaa waxaa la samayn karaa online.
Software xitaa waxaa lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah. Weli, runta weli dhaco in weerarkii yimaado si jilicsan in mid ka mid ma aha oo halis gelin kara waxaa ka tago gacan ku bilaawdo. Sidaa darteed, baahida loo qabo in dib u soo kabashada xogta waa in had iyo jeer la tagay si khabiir ku ah. Tani waa si looga hortago waxyeello dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka kuwaas oo keeni kara khasaare xogta joogta ah.
Waxaa wanaagsan in la ogaado in ay jiraan adeegyo aad aamini karto. Sida aad ka faa'ideysto adeegyadan, marna ku guul darreysato inay isku dayaan weydiisanaya nidaam gurmad ah si looga hortago khasaaro xogta ka kale u dhicin. Shirkadaha Inta badan bixinta Adeegyada ka soo kabashada weerar waa dhab inay xirfad leh soo kabashada xogta laakiin sidoo kale in la hubiyo in macaamiisha heli doonaa idinkoo shifaysan dheer. Tani waa sababta hababka gurmad waa in lagu dhejiyaa aad. Nidaamkani waxa uu u rakibtay shirkadda laftiisa oo laga heli karo by user si ay u files gurmad si joogta ah. Tani waxay hoos u dhigi doontaa baahida loo qabo in mar kale ku baaqeen in gargaar.
Xogta Luminta maalmahan curyaamin laga yaabaa in aad nidaamka at hal dhibic in waqti, weli, waxaa jira xal dhamaystiran waxa u sheegay in xitaa si fudud loo heli karaa. Waxa kaliya in khubaro ka codsanaynaa waa in user ee isku dayin inaad hagaajin nidaamka haddii ay jiraan aqoonta yar oo ku saabsan. Sug khubaro inay ugu timaado si aad gargaar si looga hortago waxyeello dheeraad ah ka qaadato meel.
Adeegyada kabashada weerar
Posted in Weerar Data Recovery, Kale, Weerar 5 Data Recovery, Service Recovery weerar Tagged kabashada xogta weerar, Weerar 5 kabashada data, kabashada xogta weerar, Adeegyada kabashada weerar, weerar soo kabashada xogta server, kabsado weerar isugu soo diyaariyeen, kabsado weerar disk	Posts navigation
Categories	Weerar Data Recovery
Weerar 5 Data Recovery
Service Recovery weerar
Recent Posts	Waxa ku jira Service Recovery weerar ah
Maxaa laga fiiriyaa in Company a weerar Data Recovery
Wax Walba Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato saabsan weerar 5 Data Recovery
TranslationDhig sida luqadda default& Nbsp; Edit Translation The Blog by Kroll Ontrack Data RecoveryHow to Handle a Corrupted Hard DriveNo Summer Break for Data LossAvoiding Data Loss in Windows 10 Creators UpdateUsers of Virtual Platforms are Victims of Data Loss Because of Their Own MistakesNew Petya Ransomware Strikes Around the GlobeHow to React When Your Data is Corrupted?How Kroll Ontrack Recovered the Data Stored on Space Shuttle Columbia’s Hard DrivesChoosing an IT Asset Disposal ProviderDouble Murder5G: The Fifth Generation of Mobile Network Communication Technology